ထောင်စုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်များ - Myanmar Laws
Home Myanmar Laws Myanmar Web SItes List
You are here: http://laws.myanmars.net / ထောင်စုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်များ
Search Myanmar Laws - ဥပဒေများကို အလွယ်တကူ ရှာနိုင်ပါသည်။	ဤဆိုက်တွင် ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုထားသဖြင့် ရှာလိုရာကို တိတိကျကျ ရှာဖွေပေးနိုင် ပါသည်။ ရှာလိုသည့် စာလုံးကို ဤနေရာတွင် ရိုက်ပါGo
Parent Category: Myanmar Laws	Category: နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ/စာချုပ်များ	Created on Wednesday, 25 June 2014 09:47	ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ၏ ထောင်စုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်များ
Milllenium Development Goals of United Nations (in Myanmar language)
Ref: English version: http://www.indexmundi.com/burma/millennium-development-goals.html < Prev
သင့်ထင်မြင်ချက်လေး ရေးခဲ့ပါ။	Please leave comments or requests to revise or update, about this law...
မိမိ လုပ်ရပ်အားလုံးကို မိမိ တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာလည်း ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆဲဆိုတာတွေ၊ မလုပ်ဘဲ ချက်ကျလက်ကျ ပြောဆိုဆွေးနွေး စေချင်ပါတယ်။ မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ်။ မတရားတာတွေ ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ ရပ်တန့်ဘို့က ဒီလို ဆွေးနွေးဘို့ များများ လိုပါတယ်။ ဒီမှာ ဆွေးနွေးတာတွေကို law-maker တွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြင်အောင်၊ ဖတ်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အတိုးတက်ဆုံး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ ဥပဒေ အများဆုံး ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဆိုလိုတာက ချုပ်ချယ်မှု အများဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ ကာကွယ်သင့်တာတွေကို အကာအကွယ် အများဆုံး ပေးတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကမ္ဘာမှာ အလွတ်လပ်ဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ မိမိတို့ ချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို the land of opportunities ဖြစ်လာအောင် ဝိုင်းဝန်း အကြံပေး ကြပါ။ ပြုပြင် ပေးကြပါလို့ နှိုးဆော် လိုက်ပါရစေ။
၂၀၁၆ မှ ယနေ့ထိ (ဒီချုပ်)၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၆ အတွင်း (ပြည်ခိုင်ဖြိုး)၁၉၈၈ မှ ၂၀၁၁ အတွင်း (နဝတ+နအဖ)၁၉၆၂ မှ ၁၉၈၈ အတွင်း (မဆလ)၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၂ အတွင်း (ဖဆပလ)၁၈၀၀ မှ ၁၉၄၈ အတွင်း (ဂျပန်+ ဗြိတိသျှ)
ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေကွန်ပျူတာ ဖွံဖြိုးရေး ဥပဒေအီလက်ရောနစ် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ
ထောင်စုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်များကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ် စာတမ်းသတင်းထောက် လက်စွဲလူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်းမြန်မာကို ပိတ်ဆို့သည့် ဥပဒေများမြန်မာနှင့် နိုင်ငံခြားစာချုပ်များအာဆီယံဆိုင်ရာ စာချုပ်များ
မူလသတင်း / Newsဥပဒေ / Lawsပိဋကတ် ၃ပုံ / Buddhist Bibleဝဗ်ဆိုက်လုပ်ချင်ရင် / Makeaweb siteကြော်ငြာလိုလျှင် / Advertise hereလမ်းညွှန် / Directory
2016-05-05: Control of Smoking and Consumption of Tobacco Product Law
2016-01-29 - နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ
2015-12-22 - တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
page views so far.	We have 38 guests and no members online
Copyright © 2017. Myanmars.NET